राजा वीरेन्द्रको बाटो - Koshi Online
कोशी अनलाइन बुधबार, पुष २०, २०७३ मा प्रकाशित
नेपाली सेना (त्यसबेला शाही नेपाली सेना) का तीन हजारभन्दा बढी सैनिकको घेरामा बसेका राजा वीरेन्द्र सपरिवार मारिएपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रज्ज्वल शमशेर राणाले राजा (सेनाको परमाधिपति) जोगाउने काम सेनाको दायित्वमा पर्दैन भन्ने आशयको बक्तव्य दिएका छन् । तत्कालको सैनिक ऐनअनुसार मुलुक, मुकुट र मुलुकी (जनता) बचाउने जिम्मा सेनाकै थियो, तर सेनापतिले गलत अर्थ लाग्ने बक्तव्य दिँदा सर्वसाधारणले ‘यो के भन्न खोजेको ? ‘ भन्ने प्रश्न गरे । धेरैले प्रश्न गरे, ‘ऐन मौकामा सुरक्षा दिन नसक्ने ती पल्टन केका लागि राखिएका थिए त ?
(साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक/भदौ २०, २०७३ )
नेपालमा धानचामलको कथा : गर्विलो बिगत र अलमलिएको बर्तमान
मदिरा व्यवस्थापनमा व्यवसायीको चिन्ता !
‘बलात्कारीलाई फासी होइन्, त्यो भन्दा ठूलो सजाय हुनुपर्छ’
पाँचथर घटनाको सत्यतथ्य छिट्टै सार्वजनिक हुन्छ : गृहमन्त्री थापा